ဘွဲ့ကြိုလက်မှတ်အစီအစဉ်များ» Hodges တက္ကသိုလ် - ဝင်ခွင့်
Hodges တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ကြိုလက်မှတ်များသည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထူးသင်တန်းများနှင့်တွဲဖက်သို့မဟုတ်ဘွဲ့အတွက်လိုအပ်သောအဓိကခရက်ဒစ်များကိုကျော်လွှားရန်သင့်အားဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို online ၁၀၀% ပေးပြီးသင်ရွေးချယ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးရင်းသင်အားအစီအစဉ်ကိုလျင်မြန်စွာဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘွဲ့ကြိုလက်မှတ်များကို:
စီးပွားရေး (စာရင်းကိုင်၊ အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အခွန်အကောက်ပြင်ဆင်မှု)
ဒီဇိုင်းနည်းပညာ (Animation၊ AutoCAD, Graphic Design နှင့် User Experience / Web Design) ။
စီးပွားရေးနည်းပညာ (eBusiness Software, eDiscovery / eLitigation, eBusiness Ventures)
ကွန်ပျူတာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (Help Desk ပံ့ပိုးမှု၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ ကွန်ပျူတာကွန်ယက်)
Admissions Advisor ကိုဆက်သွယ်ပါ ရန်ပုံငွေရွေးချယ်မှုများအကြောင်းပြောဆိုရန်။ လက်မှတ်အချို့မှာ Core +4အရည်အချင်းပြည့်မီ (အချိန်ပြည့်စာရင်းသွင်းနိုင်သည့်နေရာ၊ ၁၂ စျေးနှုန်းအတွက်အကြွေး ၁၆ နာရီယူပြီး)၊ ခေါင်းစဉ် ၄ တွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသော (သို့) ပညာသင်ဆုအတွက်သင့်တော်သည်။
ယနေ့ Apply, သင်ရှင်သန်ရန်သင်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများရရန်သင့်အားကူညီကြပါစို့။
ကောလိပ် Affordability လမ်းညွှန်: ဖလော်ရီဒါရှိ 2020 ထိပ်တန်းအွန်လိုင်းကောလိပ်များ
အသိအမှတ်ပြုအွန်လိုင်းကောလိပ်များ: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအတွက် 25 အသိအမှတ်ပြုအွန်လိုင်းကောလိပ်များ
စီးပွားရေးလက်မှတ်များ - အသစ်
Hodges တက္ကသိုလ်စီးပွားရေးလက်မှတ်များမှကြိုဆိုပါသည်။ အကယ်၍ သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သီးသန့်အတန်းများသင်ကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်လိုပါကတွဲဖက်သို့မဟုတ်ဘွဲ့အတွက်လိုအပ်သောအဓိကခရက်ဒစ်များကိုကျော်လွှားလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည်စံပြဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို ၁၀၀% အွန်လိုင်းတွင်ကမ်းလှမ်းထားသည်၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးစီးနိုင်ပြီး၊ သင့်အားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလက်မှတ်စာမေးပွဲများအတွက်ထိုင်ရန်လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဗဟုသုတများဖြင့်ပြင်ဆင်ထားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာရရှိနိုင်စေရန်အတွက်သင်အနေဖြင့်အချိန်ပြည့်စာရင်းသွင်းနိုင်မည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ CORE + 100 အစီအစဉ်ကိုပေးနေသည်။ ၁၂ စျေးနှုန်းအတွက် ၁၆ နာရီခရက်ဒစ်နာရီပေးရပါမည်။ ထို့အပြင်သင် IV ခေါင်းစဉ်၏ရန်ပုံငွေကိုသင်ရနိုင်သည်။
စာရင်းကိုင်လက်မှတ်သည် ၀ င်ငွေအဆင့်အတန်းကိုစာရင်းကိုင်အဖြစ် ၀ င်ရောက်လိုသူများသို့မဟုတ်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များလုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းအစီအစဉ်သည်ပညာရေး၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လည်းကိုက်ညီသည် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း (NACBP) နှင့်ကျောင်းသားများအတွက်ပြင်ဆင် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ဗကပ) လိုင်စင်ရစာမေးပွဲ, တစ်နိုင်ငံလုံးအသိအမှတ်ပြုအထောက်အထား။
ဤလက်မှတ်သည်သင်တို့၏အချိန်ပြည့်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် ၁၂ ၏စျေးနှုန်းအတွက်ခရက်ဒစ် ၁၆ နာရီယူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ CORE +4အစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိုအပ်သောသင်တန်းများအားလုံးသည်သင်၏သင်၏အချိန်ကိုလေ့လာရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးခြင်းဖြင့် 16% Online ကို TEC ပုံစံဖြင့်ကမ်းလှမ်းထားသည်။ သင့်ရဲ့အရှိန်အဟုန်မှာ
စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဆိုသည်မှာသင့်အားအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အာမခံလုပ်ငန်းတွင်နောက်ခံတစ်ခုရရှိရန်အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောခရက်ဒစ်လက်မှတ်ဖြစ်သည်။ သင်လေ့လာသောအရည်အချင်းသည်အာမခံနှင့်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်အကျုံး ၀ င်သည်။
စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုလက်မှတ်တွင်အတန်းများပါ ၀ င်သည်။
ထို့အပြင်၊ ဒီလက်မှတ်တွင်ရရှိသောခရက်ဒစ်များသည်ဂျွန်ဆင်ကျောင်းစီးပွားရေးရှိတွဲဖက်သို့မဟုတ်ဘွဲ့အဆင့်စီးပွားရေးဒီဂရီပရိုဂရမ်သို့အပြည့်အစုံလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ဒီလက်မှတ်ကိုဒီဂရီနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ပြည်နယ်ရှိနေထိုင်သူကျန်းမာရေးနှင့်ဘဝအကျိုးဆောင်အေးဂျင့်လိုင်စင်အတွက်လိုအပ်သောပညာရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံနိုင်သည် (အောက်ပါ URL ကိုကြည့်ပါ)
တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အခွန်ကောက်ခံသူများအတွက်အခွန်ပြင်ဆင်သူများ၊ သို့မဟုတ်အသေးစားနှင့်အလတ်စားကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကြိုးပမ်းသူများအနေဖြင့်အခွန်ပြင်ဆင်မှုလက်မှတ်သည် ၀ င်ငွေအဆင့်မြင့်ရာထူးများကိုစိတ် ၀ င်စားသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်ပညာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည် ပြည်တွင်းအခွန်များဌာန (IRS ကို) နှင့်ကျောင်းသားများအတွက်ပြင်ဆင် IRSs တွင်စာရင်းပေးသွင်းထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်အထူးကျောင်းအပ်စာမေးပွဲ (SEE) လိုအပ်သည်။ စာရင်းပေးသွင်းထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်သည်အခွန်ဆိုင်ရာပညာရှင်ဖြစ်ပြီးတစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးအခွန်ထမ်းများအတွက်အခွန်ပေးဆောင်မှုများကို ပြင်ဆင်၍ IRS မတိုင်မီထိုအခွန်ထမ်းများကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။
တစ် ဦး ချင်းဝင်ငွေခွန်
ဖက်ဒရယ်အခွန်စာရင်းကိုင်ငါနှင့် II ကို
UX / ဝဘ်ဒီဇိုင်း
ဤလက်မှတ်သည်ကျောင်းသားများကိုမူလတန်းနေရာများအတွက် Animation Designers ကဲ့သို့သောတိုတောင်းသောရွေ့လျားဂရပ်ဖစ်များတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သည် စီးပွားဖြစ်၊ ဝက်ဘ်ကာတွန်းအလံ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပုံစံအတွက်ကာတွန်းရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်တင်ပြချက်များအတွက်တိုတောင်းသောကာတွန်းများ။ ကျနော်တို့ 20 ပေါင်းမဆိုအရေအတွက်ကအသုံးပြုပါ Adobe က Creative Cloud နောက်ဆုံးစီမံကိန်းကိုဖန်တီးရန် applications များ။
ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖန်တီးရန် Animate, XD နှင့် Dreamweaver ကိုအသုံးပြုပါ။
အကျိုးအမြတ်မယူသောရုပ်ရှင်တိုများကိုဖန်တီးရန် Adobe Premiere နှင့် Aftereffects ကိုအသုံးပြုပါ။
ကိုယ်ပိုင်ပရောဂျက်များစွာအတွက် rebrands များဖန်တီးရန် Adobe Photoshop, Illustrator နှင့် Indesign ကိုသုံးပါ။
At ၉ ရက်ပဲကြာတယ်၊ သင်ဤလက်မှတ်ကိုတစ်နှစ်မပြည့်မီပြီးစီးနိုင်လိမ့်မည်။
AutoCAD လက်မှတ်သည်ကျောင်းသားများကို CAD ပညာရှင်များအဖြစ်အဆင့်အတန်းတက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်သောဗဟုသုတကိုရယူပါ ဗိသုကာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် 2D သို့မဟုတ် 3D Drafter အဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒီအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက်ရရှိသောချေးငွေများကို Hodges တက္ကသိုလ်ရှိတွဲဖက်သို့မဟုတ်ဘွဲ့အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
AutoCAD မူကြမ်းလက်မှတ်တွင်ပညာရေးတွင် 2D နှင့် 3D ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်နှင့်ကာတွန်းစွမ်းရည်များပါ ၀ င်သည်။
ဒီလက်မှတ်ကသင့်အနေနဲ့ entry level level အနေအထားကိုသင့်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေပါတယ် ၏အဓိက applications များသုံးပြီးဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း Desktop ကိုထုတ်ဝေသူ Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator နှင့် Indesign) တစ် ဦး အမှတ်တံဆိပ်စနစ်ကတည်ဆောက်စီမံခန့်ခွဲရန်။ ထို့အပြင်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကန ဦး ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်းမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုသို့စာပို့ခြင်းကိုအမှတ်တံဆိပ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်မှန်ကန်သောဒီဇိုင်းပုံစံကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာပါ။
ဒီလက်မှတ်က ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုရယူလိုသူများအတွက်ဘွဲ့အတွက်လိုအပ်သောအဓိကသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုမသုံးဘဲ၊။ ဖုံးကွယ်ခေါင်းစဉ်များပါဝင်သည်:
Grid နိယာမအား Visual Hierarchy နှင့်မည်သို့ပေါင်းစပ်ရမည်နည်း
ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးပုံစံများထုတ်လုပ်ခြင်း
ဒီလက်မှတ်ဟာအကြွေး ၂၄ နာရီဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းမှာပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။ ရရှိသောချေးငွေများကို Hodges U. တွင်တွဲဖက်သို့မဟုတ်ဘွဲ့ရရှိနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ (UX) နှင့်ဝက်ဘ်ဒီဇိုင်း
ဤအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည်ကုဒ်များ၏အုတ်မြစ်များနှင့်အောင်မြင်သော wireframe တုန့်ပြန်မှုဒီဇိုင်း၏အခြေခံများကိုပေါင်းစပ်ပြီးပုံကြမ်းတစ်ခုမှသင်၏အယူအဆကိုမည်သို့ရှင်သန်စေနိုင်သည်ကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကဲ့သို့သောဘာသာရပ်များအတွက်ညွှန်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိသည်
Web Design I, II နှင့် III
Adobe Creative Cloud ရှိစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသုံးများထံမှနောက်ဆုံးပေါ်အသုံးချပရိုဂရမ်များကို အသုံးပြု၍ တုန့်ပြန်သောဒီဇိုင်းနည်းစနစ်များကိုလေ့လာပါ။။ သင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုအပ်လိမ့်မည် Adobe CC စာရင်းပေးသွင်းမှု ဒီတိကျတဲ့လက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုသည်။ ၂၁ ခရက်ဒစ်နာရီ ၂၁ တွင်ဤလက်မှတ်သည်တစ်နှစ်ခန့်တွင်ပြီးစီးနိုင်သည်။ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားသောအခါ UX နှင့်ဝက်ဘ်ဒီဇိုင်းလက်မှတ်သည် Hodges U. ရှိတွဲဖက်သို့မဟုတ်ဘွဲ့သို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
E-Business Ventures များ
E-Discovery / တရားစွဲဆိုမှု
ဒီလက်မှတ်သည် software-based program design၊ implement၊ mobile နှင့် application development များကို software engineering သဘောတရားများနှင့်ရောစပ်ပြီး software design နှင့် software ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်လိုအပ်သောအခြေခံကိုပြင်ဆင်ပေးသည်။
ဒီလက်မှတ်က ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘွဲ့အတွက်လိုအပ်သောအဓိကသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုမသုံးဘဲဗဟုသုတကိုလိုချင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်တန်းများပါဝင်သည်:
Java Programming နှင့် Programming Concepts
မိုဘိုင်း Application ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
Web ကို Applications ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ e-Business Ventures လက်မှတ်သည်ဖြစ်နိုင်သည် ကျောင်းသားများအားအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစီစဉ်ရန်၊ စီမံရန်၊ ကြီးကြပ်ရန်နှင့်စျေးကွက်တင်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း ဥပမာသင်တန်းများတွင်သင်ကြားပို့ချသည့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်း
ဒီပရိုဂရမ်ကရှာဖွေနေသောသူတို့အဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်လိုအပ်သောအရည်အချင်းများကိုရရှိရန် အဓိကသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုဒီဂရီမလိုဘဲသင်ကြားပေးခြင်း။ ၂၁ ခရက်ဒစ်နာရီ ၂၁ တွင်ဤလက်မှတ်ကိုတစ်နှစ်ခန့်ကြာအောင်ပြီးစီးနိုင်ပြီးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားသောအခါ Hodges U. တွင်တွဲဖက်သို့မဟုတ်ဘွဲ့ရရှိနိုင်သည်။
၎င်းသည်လိုချင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်မှတ်ဖြစ်သည် အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေသောအီလက်ထရောနစ်လောကတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်တရား ၀ င်မှုများကိုနားလည်ရန်။ သင်တန်းများသည် -
eFiling နှင့် eLitigation
ခရက်ဒစ် ၁၅ နာရီသာလျှင်ဒီလက်မှတ်ကိုတစ်နှစ်လောက်ယူနိုင်ပြီး Hodges U. မှာတရား ၀ င်လေ့လာရေးဘွဲ့ (သို့မဟုတ်အခြားဘွဲ့ဘွဲ့) သို့ပြောင်းနိုင်သည်။
Help Desk ပံ့ပိုးမှု
Help Desk အထောက်အကူပြုလက်မှတ်သည်အိုင်တီတွင် ၀ င်ရောက်မှုအဆင့်ရှာနေသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ကိုရောနှောနေခြင်း သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနယ်ပယ်တွင်စတင်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူအထောက်အပံ့နှင့်စားပွဲခုံစစ်ဆင်ရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူဟာ့ဒ်ဝဲ၊ လည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်ကွန်ယက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအောင်လက်မှတ်များ A + နှင့် Net + တွင်သင်၏လက်မှတ်ဖြင့်ရရှိသည်။ သင်တန်းများပါဝင်သည်:
A + Hardware I နဲ့ II
A + Lab / Certification ပြင်ဆင်ခြင်း
CompTIA ကွန်ယက် + လက်မှတ်ရပြင်ဆင်မှု
အသုံးပြုသူအထောက်အပံ့နှင့် Help Desk စစ်ဆင်ရေး
ခရက်ဒစ် ၁၈ ခုသာဤလက်မှတ်ကိုတစ်နှစ်မပြည့်မီရယူနိုင်ပြီး Hodges U. တွင်တွဲဖက်သို့မဟုတ်ဘွဲ့ရရှိနိုင်သည်။
ဒီလက်မှတ်ကသင့်ကိုအိုင်တီအထောက်အကူပြုအထူးကုအနေနဲ့ ၀ င်ခွင့်အဆင့်ရာထူးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေနဲ့အသင့်ပြင်ထားတယ်။ ဥပမာဘာသာရပ်များ
ရုံးသုံး application များ
ဒီပရိုဂရမ်ကရှာဖွေနေသောသူတို့အဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် A + နှင့် Net + ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအောင်လက်မှတ်များကိုသင်၏လက်မှတ်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းရရှိရန်၊ ဒီဂရီလိုအပ်သောအဓိကသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုမယူရန်။ ၂၄ ခရက်ဒစ်နာရီ ၂၄ မိနစ်တွင်ဤလက်မှတ်ကိုတစ်နှစ်ခန့်ကြာအောင်ပြီးစီးနိုင်ပြီးအောင်မြင်သောအောင်မြင်ပြီးသည့်နောက် Hodges U. ရှိတွဲဖက်သို့မဟုတ်ဘွဲ့သို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
ဤအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည်သင့်အားအခြေခံကွန်ယက်ကျွမ်းကျင်မှုများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ သင့်အားကွန်ယက်ပတ် ၀ န်းကျင်မျိုးစုံကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အထူးကွန်ယက်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။
Networking Specialist လက်မှတ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် A +, Net +, CCENT, CCNA, Linux + နှင့် Windows ဆာဗာသုံးခုတွင်စက်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရလိုသူများအတွက်ဒီဂရီအတွက်လိုအပ်သောအဓိကသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုမသုံးဘဲ၊။ သင်တန်းများပါဝင်သည်:
Lab Certification Prep နှင့်အတူ A + Hardware I နှင့် II
Windows Server နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း
Essentials Routing & Switching
Linux စနစ် & လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု